सन् २०२१ मा खुशी हुनुपर्ने पाँच कारण छन्, के हुन् पाँच कारण ? « Salleri Khabar
सन् २०२१ मा खुशी हुनुपर्ने पाँच कारण छन्, के हुन् पाँच कारण ?
प्रकाशित मिति : 26 December, 2020
११ पुस, एजेन्सी । अंग्रेजी संवतको सन् २०२० हामीबाट विदा हुने तरखरमा छ । मृत्यु, नैराश्य र गहिरो अनिश्चिय पार गर्दै सुदूर क्षितिजमा आशाका किरणको प्रतीक्षामा विश्व छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा जिम्मेवार नयाँ नेतृत्वको उदय भइरहेको छ भने आज हाम्रा अघिल्तिर देखिएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरुको लामो सूची छ । मानव निर्मित प्राकृतिक विपदको चक्र यथावत रहेकै छ, तर त्यो भन्दा पनि हामी मानवका कतिपय घातक एवं खतरनाक अभ्यास वा व्यवहारमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
लियोनार्ड अगाडि भन्छन्, “हो, यो वर्ष निकै कठिनाई पूर्ण रह्यो, तर सन् २०२१ मा खुशी हुनुपर्ने पाँच कारण छन् । पहिलो र महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पराजय । तपाइँ हामी सुतेर उठ्दा ट्वीटरमा ट्रम्पले के भने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने दिन गएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिका चाँडै नयाँ र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा जाँदैछ । युरोपमा ट्रम्पकै पदचिह्न बोकेका हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान र पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री जारोस्ल केजिन्स्की लङ्गडो झैं भइसकेका छन् । सन् २०२१ मा जर्मनी र सन् २०२२ मा फ्रान्समा हुने चुनावमा अब ट्रम्पेली मनोविज्ञान कमजोर हुनेछ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफूमा रहेको ट्रम्पकै जस्तो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन थालिसकेका छन् ।